DOWNLOAD JET AUDIO 8.1.6 - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọ nwere ike ịdị mkpa iji cheta akwụkwọ ozi ezitere Mail.Ru na ọtụtụ okwu. Ruo ugbu a, ọrụ ahụ adịghị enye aka a kpọmkwem, nke bụ ya mere naanị ngwọta bụ onye ahịa email abụọ ma ọ bụ ọrụ ọrụ ozi ọzọ. Anyị ga-agwa ma nhọrọ abụọ.
Cheta ozi ịntanetị na Mail.Ru
Njirimara a bụ ihe pụrụ iche ma ọ bụghị na ọtụtụ ọrụ email, gụnyere Mail.Ru. Enwere ike itinye akwụkwọ ozi na mkpụrụedemede.
Nhọrọ 1: mbupu oge
N'ihi enweghi ọrụ nke icheta akwụkwọ ozi na Mail.Ru ozi, naanị ihe ga-eme bụ izipụ oge. Mgbe ị na-eji njirimara a, a ga-eziga ozi n'egbughị oge, n'oge a ga-eme ka ngbanwe ahụ kwụsị.
Gụọ kwa: Otu esi dee leta na mail.Ru mail
Iji mee ngwa izipụ oge, ịkwesịrị ịpị akara ngosi pụrụ iche ma dee oge achọrọ iji zipu. Ma ọ bụghị ya, a ga-agbanwe oge ahụ na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na i mee nke a tupu ịmalite ịdezi, ị gaghị emenye ụjọ.
Mgbe izipụ akwụkwọ ozi ọ bụla ka akwagara na ngalaba ahụ. Ọpụpụ. Mepee ma họrọ ozi achọrọ.
Na leta ederede ederede, pịa na igbu oge izipu akara ngosi ọzọ. Nke a ga-eme ka ozi ahụ gaa "Edere".
Usoro a tụlere bụ ụzọ nchedo nke na-enye gị ohere ịkagbu izipu ozi na-adịghị mma maka akwụkwọ ozi ahụ nke onye natara ya. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ụzọ ọzọ na-enweghị software pụrụ iche.
Nhọrọ 2: Microsoft Outlook
Ọrụ maka ihichapụ ozi ezipụ dị na Microsoft Outlook maka Windows email ahịa. Usoro a na-akwado ọrụ ọ bụla ozi, gụnyere Mail.Ru, na-enweghị ọrụ ịchụ àjà. Mbụ ị chọrọ itinye akaụntụ site na ntọala.
Gụkwuo: Otu esi tinye mail na Outlook
Gbasawanye menu "Njikwa" na n'elu mmanya na ịnọ na taabụ "Nkọwa"pịa bọtịnụ ahụ "Tinye Akaụntụ".
Dejupụta aha gị, adreesị na paswọọdụ gị site na mailbox Mail.Ru. Mgbe ahụ jiri bọtịnụ ahụ "Na-esote" na ala ala.
Mgbe ịchisịrị usoro mgbakwunye ahụ, a ga-egosipụta peeji kwekọrọ na ibe ikpeazụ. Pịa "Emere" imechi windo.
N'ọdịnihu, nloghachi nke akwụkwọ ozi ga-ekwe omume nanị n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ anyị kwuru na otu n'ime isiokwu dị na saịtị ahụ. Ihe ndi ozo kwesiri ka akowara na ntuziaka a.
Gụkwuo: Otu esi ehichapụ izipu ozi-e na Outlook
Na ngalaba "Zitere" chọta akwụkwọ ozi a na-ewepụ ma pịa bọtịnụ aka ekpe.
Pịa "Njikwa" na n'elu mmanya na-aga na ngalaba "Nkọwa" ma pịa na ngọngọ ahụ "Nyochaa na Nyocha". Site na ndetu ndepụta, họrọ "Kpochapụ ozi ...".
Site na windo na-egosi, họrọ ọnọdụ ehichapụ ma pịa "OK".
Ọ bụrụ na ịga nke ọma, ị ga-enweta ọkwa. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ịchọta banyere mmezu nke usoro ahụ.
Usoro a kachasị dị irè ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị gị na ha na-arụ ọrụ na-ejikwa usoro ahụ emeleghachi. Ma ọ bụghị ya, mgbalị ga-abụ n'efu.
Hụkwa: Nhazi dị mma nke Mail.ru na Outlook
Enweghị nhọrọ ọ bụla anyị nyere na-enye anyị nkwa maka nkwụsị ọrụ nke nzigharị ozi, karịsịa ma ọ bụrụ na onye nnọchiteanya ahụ enweta ya ozugbo. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na mbubataghị ihe ọ bụla na-emekarị, ịnwere ike ịgbanwe na iji Gmail, ebe ọrụ nwere ike iji cheta ozi maka oge dị oke.
Hụkwa: Otu esi ewepu akwụkwọ ozi na mail